Qormaata biyyaalessaa Itoophiyaa: Koreen qabxii qormaata 'Aptitude' qulqulleessu hundaa'e - BBC News Afaan Oromoo
Qormaata biyyaalessaa Itoophiyaa: Koreen qabxii qormaata 'Aptitude' qulqulleessu hundaa'e
Image copyright TIKVAH
Goodayyaa suuraa Qabxiin Aptitude haalaan gadi bu'eera jedhu barattoonni
Barattoonni qormaata seensa yunivarsitii baranaatiin qabxii olaanaa galmeessan tokko tokko qabxii gosa qormaataa 'Aptitude' irratti komii dhiyeessaa jiru.
Barattoonni magaalaa Dirre Dhawaa manneen barnootaa qophaa'inaa tokko tokko turaniifi maatiinsaanii gara biiroo barnootaa deemuusaanii himanii, Itti gaafatamtuun biiroo Barnootaa komiisaanii kana qaamaan oggantoota olaanootti akka dhiyeessan BBC'tti himaniiru.
Qormaata kufus, imalli koo itti fufeera
Haadha deessee daqiiqaa 30 booda qormaata qoramte
Barattuun Mana Barnootaa qophaa'inaa Beezaa taate, BBC'tti komiishee himte waan jettu, qabxii gosa barnootaa walii galaa galmeessite irrattis komii qabbaattus kan Aptitude garuu baayyee kan eegdeen gadi ta'u dubbatti.
''Kan kiyya 100 keessaa 35 yoo ta'u kan hirriyoota kiyyaa 20 fi isaan gadi'' jechuun qabxii barattoota qormaata waliigalaatiin 400 fi isaan olii galmeessan eeruun garaa garummaasaa dubbatti.
Barattoonniifi maatiin biiroo Barnoota Dirre Dahwaatti argamuun har'a komii keenya dhiyyeeffannees maatiifi barrattoota manneen barnootaa qophaa'iinaa Rootitodaam, Bisiraata Gabreel, fi Beezaa ta'usaanii baruun danda'ameera.
Jiraattuun Magaalaa Maqalee tokkos gama isheetiin qabxii gosa barnootaa kan biraattiyyu gammadoo akka hintaane dubbattee jirti.
Qabxiin Aptitude ishees kan eegdeen gadi ta'u himtee, ''barataan Aptitude dhaan badhaafamaa turan dabalatee qabxii gadaanaa galmeessan.
Barataan tokko attamiin 100 keessaa 6, 7, ykn 0 galmeessuu danda'a?'' jechuun gaafatti.
''Qophiin ani qormaatichaaf taasiseen yoo wali bira qabamee ilaalamu, qabxiin argadhe gonkumaa wal hingitu,'' jechuun komiishee BBC'tti himte.
Image copyright NEAA FACEBOOK
Goodayyaa suuraa ''Barattoonni komii qaban kamuu dhuunfaan dhiyeeffachuu danda'u'' jedhu Aabba Arayaan
Hojii gaggeessaan Ejjansii Qormaataafi Madaallii Barnoota Biyyaaleessaa Obbo Arayaa Gabra Igzaabeer gama isaanitiin, komii barattoonni dhiyeeffatan dhagahuusaanii BBC'tti himuun, haala kana qulqulleessuuf koreen tokko hundaa'uus dubbataniiru.
Amma keessummeessaa jirra kan jedhan Aabba Arayaan, barattoonni komii qaban kamuu dhuunfaan dhiyeeffachuu akka danda'an dubbataniiru.
Qabxichi karaa intarneetiin kan gadhiifameef, namuu ilaaluun komii qabu dhiyeeffachuu akka danda'uufi kan jedhan Obbo Arayaan, kan dhumaa kan ta'u qabxii isa waraqaatti maxxanfamee keennamu ta'uu ibsu.
Kanaafuu komiisaanii qaamaan, karaa bilbilaa, yoo ta'u baate ammoo, marsariitii irratti dhiyeeffachuu akka danda'amu nutti himaniiru.
Namni komii dhiyeeffatus lakkoofsa addaa qormaataa (Registration Number) fi gosa barnootaa guutuun gaaffii osoo dhiyeesseef maxxansa waraqaa ragaatiin dura keessummeeffamuu danda'a jedhaniiru.
Qabxiin seensa Yunivarsiitii ykn kutaa 12ffaa kaleessa -Kibxata ifa ta'uu Ejensiin Qormaataafi Madaallii Barnootaa beeysiseera.
Haaluma kanaanis qabxiin olaanaa galmeeffame 645 tahuu fi barattoonni 59 qabxii 600 ol galmeessuu isaaniis barameera.
Barattoota qoraman keessaa barattoonni harka 48.59 tahan qabxii 350 ol fidaniiru. Qabxiin barattoota 68's seera kan hin hordofne waan taheef guutummaatti haqamuunsaas gabaafameera.
Haala akkamiin qabxii keessan ilaaluu dandeessu?
Warri qormaata kana fudhattan haala itti aanuun qabxii keeysan ilaaluu dandeessu:
marsariitii app.neaea.gov.et seenuun Lakkoofsa Galmee (Registration Number) keessanii galchuun 'Go' jechuun isinii fida.
Kana malees barattoonni qabxii qormaata isaanii karaa ergaa gabaabaa 8181 ilaaluus danda'u jedhameera.
Haadha deessee daqiiqaa 30 booda qormaata kutaa 10 qoramte
10 Waxabajjii 2019
Aljeeriyaan qormaata manneen barnootaan ol aanoof interneetii cufatte
21 Waxabajjii 2018
Viidiyoo Qormaata Chaayinaa deebii hinargatiin hafe
23 Guraandhala 2018
Gumaata Kaampaasii 9: Qormaata kufuurraa hanga barsiisaa Yuuniversitiitti
9 Amajjii 2019
Qormaata seensa Yuunivarsiitii: Barataa akkuma maqaa isaa caalee argame
3 Hagayya 2018
Marsariitii qabxiin irraa ilaalamu
Gulantaan barnootaa jijjiirame Afaan barnootaa ni jijjiiraa?
Gareen Itoophiyaa Ertiraatti imale hin milkaa'in hafe